Jawaab: Kusoo Kordhi Ka Qayb Qaadashadaada Iibinta Iyadoo La Samaynayo Emailka LinkedIn iyo Gaaritaanka | Martech Zone
Jawaab: Kusoo Kordhi Ka Qayb Qaadashadaada Iibinta Iyadoo La Raadinayo Email-ka LinkedIn iyo Gaaritaanka
Khamiista, Noofembar 5, 2020 Khamiista, Noofembar 5, 2020 Douglas Karr
Qofna kuma doodi karo taas LinkedIn waa meheradda isku xirnaanta bulshada ee ganacsiga ku saleysan meeraha. Xaqiiqdii, kamaan eegin resume ku lifaaqan murashax kumana cusboonaysiin cusboonaysiin tayda muddo toban sano ah tan iyo markii aan adeegsaday LinkedIn. LinkedIn kaliya iima ogola inay aragto wax kasta oo resume ah ay qabato, laakiin sidoo kale waxaan baari karaa shabakada musharaxa oo aan arki karaa cidda ay la shaqeeyeen iyo - ka dibna la xiriir dadkaas si aad wax badan uga ogaato.
Dabcan, maahan oo keliya ilaha shaqo-doonka iyo qandaraasleyda… sidoo kale waa keydka ugu ballaadhan ee meeraha ee wada-hawlgalayaasha macdanta iyo rajada sidoo kale, gaar ahaan haddii aad geynaysid Suuq-Ku-saleysan Xisaabeed Istaraatiijiga.
Kajawaab Ka Qayb Qaadashada
Reply waa multichannel madal hawlgelinta iibka taas oo otomatig ka dhigaysa wacyigelinta emaylka shaqsiyadeed, wicitaanada, iyo shaqooyinka, halka Iibinta ay diiradda saari karto waxa run ahaantii muhiim ah - heshiisyada xidhitaanka. Waa kuwan muuqaalka muuqaalka guud:
Waxyaabaha jawaabta ku dar
Reply waxay awood kuu siineysaa inaad kuhesho rajo tayo leh ololahaaga gaarsiinta LinkedIn ee Salesforce, Hubspot, Copper CRM, iyo sidoo kale daraasiin bixiyeyaasha xogta iyada oo loo marayo isku-dhafnaanta hooyo iyo adeegyada saddexaad.
Kordhinta LinkedIn Chrome - Raadi emailada ganacsiga ee rajada 'LinkedIn' oo kor u qaad wax soo saarkaaga Jawaab Kordhinta Chrome. Hawlahaaga maalinlaha ah iyo awoodda aad ku xidhiidhi karto LinkedIn, emayllada iyo codka marwalba waa la gaari karaa.
Nidaamka Iibinta Multichannel - Ka qaybgal rajadaada adoo adeegsanaya wadiiqooyin fara badan - u dir e-mayl shaqsiyadeed iyo dabagal, wicitaano, fuliya howlaha maalinlaha ah, isku xir oo gaadho rajadaada si otomaatig ah LinkedIn.
Wax soo saarka iibka - Ku xooji wax soo saarkaaga hawlaha maalinlaha ah iyo awoodda aad ugu xirmi karto LinkedIn, emaylka, codka, iyo bulshada. Waxqabad gal, oo asal ahaan ku xir CRM-gaaga, Zapier, ama isdhexgalka API.
Maareynta Xiriirka Iibka - Si fudud ugu maamul macaamiisha mustaqbalka - qayb ka mid ah rajooyinkaaga iyadoo loo eegayo tiro aad u tiro badan oo shuruudo ah si aad u gaadho fidintaada abaabul. Soo rar ama ku dar xiriirada, xiriirada qeybta, miirayaasha miiraha, dib u eeg taxanahooda taariikhdooda iyo howlahooda, iyo sidoo kale liiska madow ee cinwaanada iyo xiriirada.
Wicitaanada Cloud Cloud - Ku xidho rajadaada taleefanka midig koontadaada Jawaabta iyo fidinta Chrome. Ku hirgeli codka isgaadhsiintaada iibka ah Wicitaanada Cloud.
Astaamaha Iibka Smart - Aasaasiyada AI-taageerto Leverage Reply ee AI si aad ula socoto himilooyinkaaga si kafiican oo dhaqso badan - oo ay kujirto kala soocida emaylka sanduuqa, hubinta tayada, iyo soo jeedimaha, ficilada la soo jeediyey iyo baaqyada la soo jeediyey ee rajada kulul.
Kooxda Iibinta - Iskaashi ka samee ololeyaasha iyo rajooyinka, maareynta xubnaha kooxda, wadaagaan e-maylka iyo moodellada ololaha, la socoshada waxqabadka kooxda iyo in ka badan oo la socota Kooxda Jawaab celinta.
Warbixinnada Iibka iyo Falanqaynta - La soco horumarkaaga taxanaha ah isla markaana ku falanqee natiijooyinka kooxdaada Warbixinta faahfaahsan ee Jawaabta ee isku xigxiga, natiijooyinka kooxda, duubista wicitaanka, iyo wicitaanka dhageysiga oo ay weheliyaan awooda dhoofinta
Jawaab Qalabka Hagaajinta - Tuuji farriintaada si aad u gaarto waxqabadka ugu sarreeya - Jawaabtu waxay leedahay qalab horumarin ah oo kaa caawinaya inaad hesho natiijooyin wanaagsan, oo ay ku jiraan tayada iimaylka, baaritaanka A / B, qaabab isku xigxiga, iyo jadwalka dirista sanduuqa.
Hel Jawaab Demo
Shaacinta: Waxaan isticmaaleynaa a Reply xiriiriye ku xiran maqaalkan.
Tags: wac wacyi gelincadeyncontactcloudnaxaas crmdatanyzeraadinta emaylkaansaxinta emaylkaXiriir buuxahubsashoLinkedInxiriirinta fidintamadduusuuq geyn dibedda ahiibinta dibaddaxamaalJawaabmaaraynta xiriirka iibkahawlgelinta iibkamadal hawlgelinta iibkagaadhsiinta iibkawarbixinta iibkaiibinzapierzoominfo
Kheyraadka Naqshadeynta Calaamadaha: Talo bixin, Soo degsiinno, Infographics, iyo Ku Dhaqanka Ugu Fiican
Waa maxay sababta Bartilmaameedka Macnaha guud ay muhiim u tahay suuqleyda baaraya mustaqbalka cookie-ka yar